लहान २१ पुस । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सिरहाको लहानमा आज बिहान अज्ञात समुहको ढुङाले लागेर बसका चालक घाइते भएका छन् ।
ढुङाले लागेर काठमाण्डौबाट काकडभिट्टातर्फ आउदै गरेको ना. ४ ख ४७१२ नम्बरको बसका चालक हेटौडा रातमाटे निवासी अन्दाजी २५ वर्षिय बादल लामा घाइते भएका हुन् । ढुङाले चालकको सिट छेउको शिशा फुटेर लामाको अनुहारमा लागेको थियो । सामान्य घाइते उनलाई सप्तरीस्थित युनिक अस्पतालमा उपचार गराइएको छ ।
बिहान करिब ५ बजेतिर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउदै गरेको रात्री बसहरुलाई बिहान करिब ५ बजेतिर लहान बजारमा लुकिछिपी बसेका समुहले ढुङामुढा गरेका थिए ।
उता, सिरहा जिल्लाको बस्तीपुरमा आज बिहान ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जना घाइते भएका छन् ।
दक्षिणवाट उत्तरतर्फ आउदै गरेको स. १ त ४३४२ न को ट्याक्टर लहान नगरपालिका १४ स्थित बस्तीपुरमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा ट्याक्टरमा सवार लहान नगरपालिका १२ बस्ने ३४ वर्षिय उमेश विश्वकर्मा गम्भीर घाइते भएका हुन् । घाइते विश्वकर्मालाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ ।
ट्याक्टर घटनास्थलमै रहेको छ भने चालक फरार भएकाले प्रहरीबाट खोजतलाश भइरहेको छ ।